မဟာကဿပ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက် သာဝကတစ်ပါးဖြစ်သော အရှင်မဟာကဿပ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ယခင်ပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရားရှင် အတွက် ကဿပဘုရား ကို ကြည့်ပါ။
အရှင်မဟာကဿပ သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသာနာတော်တွင် ဓူတင်ဆောင်သည့် အရာတွင် ဧတဒဂ် ရသည့် ရဟန္တာ ဖြစ်သည်။ ပထမသင်္ဂါယနာတင်သည်ကို အရှင်မဟာကဿပ က ဦးဆောင်ခဲ့၏။ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရန် ရှင်မဟာကဿပကို တာဝန်ပေးခဲ့၏။
၃ ဘုရားရှင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အရှင်မဟာကဿပကို မဂဓတိုင်း၊ မဟာတိတ္ထိရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်မည်မှာ ပိပ္ပလိ ဖြစ်၏။ ဖခင်မှာ ကပိလ ဖြစ်၏။ ဗြဟ္မဏမျိုးရိုးဖြစ်ပြီး ကုဋေ ၈၇ ကုဋေ ကြွယ်ဝသည်။ ပိပ္ပလိ၏ ဇနီးမှာ ဘဒ္ဒါကာပိလာနီ ဖြစ်သည်။
ပိပ္ပလိသည် အရွယ်ရောက်လာ၏။ ထိုအခါ မိဘတို့က အိမ်ရာတည်ထောက်ရန် နားချကြ၏။ ထိုအခါ ပိပ္ပလိသည် ရွှေစင်ရုပ်တုကိုသွန်းလုပ်ပြီး အဝတ်တန်ဆာတို့ကို ဆင်မြန်းစေ၏။ မိဘတို့အား ထိုရုပ်တုနှင့် တူသူကို ရပါက အိမ်၌ နေမည်၊ မနေလျှင် အိမ်ရာတည်ထောင် လူတို့ဘောင်တွင် မနေပါ ဟု ပြော၏။ ထိုအခါ မိဘတို့သည် ပုဏ္ဏားရှစ်ယောက်တို့အား ရွှေစင်ရုပ်တုနှင့် တူသူကို အရှာလွှတ်၏။ ရှာဖွေရာ မဒ္ဒတိုင်း သာဂလမြို့တွင် တွေ့၏။ တွေ့ခဲ့သူမှာ ကောသိယဂေါတ္တပုဏ္ဏားသူဌေးကြီး၏ သမီးဖြစ်သူ ဘဒ္ဒါကာပိလာနီ ဖြစ်၏။ ထို့နောက် ပုဏ္ဏားတို့သည် ရွှေစင်ရုပ်တုကို ပေးကာ အကျိုးအကြောင်း ပြော၏။
ပိပ္ပလိနှင့် ဘဒ္ဒါကာပိလာနီတို့သည် စာပေလွှာများ အပြန်အလှန် ပေးပို့ကြ၏။ စာထဲတွင် ပါဝင်သည်မှာ အခြားတစ်ယောက်ကို ယူရန်၊ မိမိမှာ တောထွက်မှာ ဖြစ်သည့်အကြောင်း ရေးသားထား၏။ သို့သော် စာပို့လုလင်က မူလစာတို့ကို ဖျောက်ပစ်လိုက်၏။ နှစ်သက်သည့်၊ ဝမ်းမြောက်သည့် စာများပါသည့် စာလွှာများကို ရေးကာ ပို့လေ၏။ မိဘတို့၏ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကြားလူတို့ကြောင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြား ဖြစ်လေသည်။ ဇနီးမောင်နှံ ဖြစ်သော်လည်း မောင်နှမကဲ့သို့ နေထိုင်ကြ၏။ အိပ်သည့်အခါတွင်လည်း အလယ်တွင် ပန်းကုံးနှစ်ခု ခြားထား၏။ ရာဂစိတ်ဖြစ်သူ၏ ဘက်မှ ပန်းကုံးသည် ညှိုးစတမ်းဟု ကတိထားကာ အိပ်ကြ၏။ ပန်းတို့သည် မညှိုးကြပေ။
ပိပ္ပလိနှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့သည် မိဘသဘောတူ လက်ထပ်ခဲ့၏။ သို့သော် မောင်နှမကဲ့သို့သာ နေခဲ့၏။ တစ်ခါသော် လယ်ကွင်းထဲတွင် ပိုးမွှားတို့သေ‌ကြနေသည်ကို တွေ့ရသော် သံဝေဂ ဖြစ်ကြရသည်။ ထို့နောက် နှစ်ဦးသဘောတူ တောထွက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး ရဟန်းအသွင်ဝတ်ဆင်ကာ ပိပ္ပလသည် ရာဇဂြိုဟ်သို့ လည်းကောင်း၊ ဘဒ္ဒါကာပိလာနီသည် ပရိဗိုဇ်မ အာရမ်သို့လည်းကောင်း ထွက်ခဲ့လေသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် ပိပ္ပလိကို ကြိုဆိုရန် ရာဇဂြိုဟ်မှ သုံးဂါဝုတ်ဝေးသည့် ရာဇဂြိုဟ်နှင့် နာလန္ဒာအကြားရှိ ဗဟုပုတ္တက ညောင်ပင်၌ သီတင်းသုံးကာ နေတော်မူ၏။ ပိပ္ပလိအား ဘုရားရှင်မှန်းသိစေရန် ခြောက်သွယ်သော ရောင်ခြည်တော်တို့ကို လွှတ်၏။ ထိုအခါ ပိပ္ပလိလည်း ဘုရားရှင်ထံ တပည့်ခံကာ ရဟန်းဝတ်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ကဿပ ဟူသည့်အနွယ်အမည်ဖြင့် ရဟန်းပြုပေး၏။ ထိုအခါမှ စတင်ကာ သာသနာ့သမိုင်းတွင် အရှင်မဟာကဿပ ဟူ၍ ရဟန္တာတစ်ပါး ပေါ်ထွန်းခဲ့၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဝါတော်တစ်ဝါအရတွင် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော် ရှင်မဟာကဿပနှင့် ဒုကုဋ်သင်္ကန်းချင်းလဲကာ ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ချီးမြှောက်တော် မူခဲ့သည်။ ထိုအခါ မဟာပထဝီမြေကြီးသည် ပြင်းထန်စွာ တုန်လှုပ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဒုကုဋ်သင်္ကန်းသည် ပုဏ္ဏာဟု အမည်ရှိသည့် ကျွန်မ၏ အလောင်းမှ တစ်ပြည်လောက်ရှိသည့် လောက်တို့ကို ဖယ်ကာ ပံသကူ ကောက်ယူခဲ့သည့် သင်္ကန်းဖြစ်သည်။ ပံ့သကူကောက်ယူစဉ်ကလည်း မဟာမထဝီမြေကြီးသည် တုန်လှုပ်ခဲ့သည် ဖြစ်၏။ ရှင်မဟာကဿပသည် ဓူတင်အားလုံးဆောင်ကာ အားထုတ်ရာ ၈ ရက်မြောက်တွင် ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူ၏။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ဦးရွှေအောင် - မဟာဝိဇ္ဇာ(သက္ကတ)၊ ဝဋံသကာ နှင့် သိရောမဏိ (၁၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၂)။ ဓမ္မပဒ (ယမကဝဂ်၊ စိတ္တဝဂ်၊ အပ္ပမာဒဝဂ်၊ ပုပ္ဖဝဂ် ပေါင်းချုပ်)။ အမှတ် ၃၈၊ ၁၀၉ လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့: ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်။ pp. ၃၄၁၊ ၃၄၆၊ ၃၄၇၊ ၃၄၈။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)CS1 maint: location (link)
↑ သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန (၂၀၀၅)။ ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်း တစ်ယောက်။ pp. ၆၁၈၊ ၆၁၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာကဿပ&oldid=559339" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။